ဆန်းသစ်တဲ့ အရောင်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ HUAWEI Y9 (2019) ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်သွားမည် – MyStyle Myanmar
ဆန်းသစ်တဲ့ အရောင်လေးတွေနဲ့ ဖန်တီးထားတဲ့ HUAWEI Y9 (2019) ကို မြန်မာနိုင်ငံမှာ မိတ်ဆက်သွားမည်
HUAWEI Myanmar အနေနဲ့ HUAWEI Y9 (2019) ကို ပြည်တွင်းမှာ မကြာခင် မိတ်ဆက်နိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်နေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ HUAWEI Y9 (2019) ဆိုတာကတော့ ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ မတ်လတုန်းက မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ Y9 (2018) ရဲ့ မျိူးဆက်သစ် စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးဖြစ်သလို၊ ဒီဇိုင်းနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်းတွေမှာလည်း ပြောင်းလဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ထားတဲ့ စမတ်ဖုန်း တစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
HUAWEI Y9 (2019) ရဲ့ မျက်နှာပြင်ဟာ Y9 (2018) ရဲ့ မျက်နှာပြင်ထက် ပိုမိုကြီးမားလာမှာ ဖြစ်ပြီး၊ ယနေ့ခေတ် စမတ်ဖုန်းလောကမှာ လူကြိုက်များပြီး ရေပန်းစားနေတဲ့ Display Notch လည်းပါဝင်မှာပါ။ ဒါ့အပြင် ဖုန်းကို လက်ထဲမှာ ကိုင်တဲ့အခါ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့အတွက် Y9 (2019) ကို 3D Curved Arc Design နဲ့ ဖန်တီးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
HUAWEI Y9 (2018) ဟာ တန်ဖိုးနည်း စမတ်ဖုန်း အမျိူးအစားဖြစ်ပြီး ကင်မရာ ၄လုံးပါဝင်တာကြောင့် လူအများရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ အခု Y9 (2019) မှာလည်း ကင်မရာ ၄လုံးပါဝင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ အဆိုပါ ကင်မရာတွေကို Artificial Intelligence (A.I.) လို့ခေါ်တဲ့ ဥာဏ်ရည်တုနည်းပညာက ထောက်ပံ့ပေးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ HUAWEI Y9 (2019) ရဲ့ ကင်မရာစနစ်တွေကို A.I. နည်းပညာက ထောက်ပံ့ပေးထားမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အရာဝတ္ထုနဲ့ မြင်ကွင်းတွေကို ခွဲခြားသိမြင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပြီး၊ အလင်းအမှောင်နဲ့ အရောင်တွေကိုလည်း အလိုအလျောက်ချိန်ညှိပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် HUAWEI Y9 (2019) ရဲ့ ကင်မရာစနစ်တွေဟာ Y9 (2018) ထက် အများကြီး တိုးတက်ပြောင်းလဲ လာနိုင်ပါတယ်။
HUAWEI Y9 (2018) မှာတုန်းက Black, Blue နဲ့ Gold ဆိုတဲ့ သာမန်အရောင်တွေကိုသာ ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့်၊ အခု Y9 (2019) မှာတော့ ဆန်းသစ်တဲ့ ဒီဇိုင်း၊ ကာလာလေးတွေကို ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Gradient Color လို့ခေါ်တဲ့ အရောင်ပြေး ဒီဇိုင်းလေး ပါဝင်လာမှာ ဖြစ်တာကြောင့် အလှအပကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် HUAWEI Y9 (2019) က ရွေးချယ်စရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
MyStyle Myanmar2018-12-20T19:19:04+06:30October 10th, 2018|Lifestyle|